Himalaya Dainik » उजाडियो पौडेल परिवारको घर, दुई जवान छोराको शव उठाउँदा नरुने कोहि भएन
बेपत्ता भएका एकै घरका दुई जना दाजुभइ मृत अवस्थामा फेला परेपछि यो घटनाले सनसनी मच्चायो । गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं. २ एसपीएम टोलका वर्ष २६ का विजयबाबु पौडेल र वर्ष २१ का संगम पौडेल सोमबार विहानदेखि सम्पर्कविहीन रहेका थिए ।
सोमबार बिहान घरमा परिवारसँगै खाना खाएर करिव साढे १० वजे घरबाट निस्केका उनीहरु सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले खोजी गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरु दुवैजनाको शव बुधबार साँभ ६ बजेतिर गैंडाकोट ३ जयश्री खोलाको रहमा भेटिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटका प्रमुख ईनिस्पेक्टर चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । पानी ल्याउन जयश्री खोलामा वाँधिएको बाँधबाट वनेको रह (पोखरी) को किनारमा एउटा र पानीमा डुवेको अवस्थामा अर्को युवाको शव फेला परेको थापाले जानकारी दिए । जंगलमा घाँस दाउरा गर्न जानेले शव देखेपछि खबर पाएको थापाले बताए ।
दाजुु विजय एसपीएम कलेजमा स्नातकतह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन भने भाई संगम सप्तगण्डकी बहुमुखी कलेज भरतपुरमा स्नातकतह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रहेको परिवारले जनाएको छ ।
यिनै छोराहरुको लागि हामी गाउँ छोडेर यहाँ आएको भन्दै आमाले धरधरी रुँदै भनिन्, छोराहरुलाई दुख के हो थाहा थिएन । हराए पनि हामीले तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गर्न सकेनौ कारण फेरी ठुला भएका छोराहरुले यति छिटै किन रिपोर्ट गरेको हो भनेर भन्लान भन्ने पिरले ढिलो खबर गरेको आमाले रुँदै बताइन् ।
बिवाह गरेको २ महिनामै श्रीमानको मृत्युको खबरले श्रीमती पनि एकदमै पीडामा छन् । श्रीमतीले हामी बीच कुनै झैँ झ-गडा नभएको बताएकी छन् । कहिल्यै धेरै लामो समय सम्म घर बाहिर समेत नजाने दुई दाजुभाईको शव संगै फेला परेका हुन् ।
परिवारका सदस्यको चाहना अनुसार पोष्ट-मार्टम पनि दुई पटक गरिने भएको छ । कतिपय घटनामा पोष्ट-मार्टम रिपोर्ट सहि नआएको उदाहरुण आफुहरुले देखेका कारण दोस्रो पटक पनि पोष्टमार्टम गर्न आग्रह गरिएको बुवाले बताएका छन् । पोष्ट-मार्टम पछि विजय र संगमको शव घरको आगनबाट उठाएर अन्तिम संस्कारको लागि लाँदै गर्दा सिंगो गाउँ सोकमा डुबेको थियो भने त्यहाँ भेला भएका आफन्त र गाउँलेको आँखामा आशु देख्न सकिन्थ्यो ।
सामाजिक संजालमा तस्विर हाल्दै मिना केसीले लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै :
आकाश सुनसान छ मानिस हरुकाे भिडछ आगनमा राम लक्ष्मण जस्त छाेरा पयालाे पितामवरी अाेडेर मस्त निन्द्रमा सुतिरहेकाछन ईश्वरले खै के काे सजाय दिदैछ छाेराकाे काधमा वाेकिएर जाउला भन्ने सपना बाेकेका बाबा आमा ले आज २ जना छाेरा हरुकाे लास आफ्नाे काधमा बाेक्दा काे कालाे दिन कुनैपनि अभाकी बाबा आमालाई नपराेस भगवान छाै भनी बरु जन्म नदेउ जन्मे पछि यस्ताे लाउ लाउ खाउ खाउ भन्नी वेलामा नखाेस कुनैपनि बाबा आमालाई यस्ताे सजाय नदेउ ।
जाे आज परेकाे छ जवान छाेरा २६ वर्ष का विजय बाबू पैडेल २१ वर्षका सङ्गम पाैडेल दुई दाजु भाई घरै रित्तो वनाएर गाउँ नै शून्य पारेर यस सन्सार छाेडेर गयाै आमा बुवा घर परिवारलाई जीवनमा नमेटिनी घाउ दिएर गयाै वैकुण्ठ बाँस हाेस हार्दिक श्रद्धाञ्जली बावुहरु
संसारकै सबैभन्दा महंगो जिन्सः जसको मूल्य सुन्दा उड्न सक्छ होस्
प्रेमिकाको आग्रहमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले राजीनामा दिन लागेको खुलासा
यस्ता स्त्रीका लागि हुन्छन् आफ्ना पती नै शत्रु !
मनोज गजुरेलको स्वास्थ्यको कामना गर्दै पूर्वपत्नी ढकालको मनछुने स्टाटस